Apple iPhone SE 2020 256GB (Black)-15 – ICT.com.mm
HomeApple iPhone SE 2020 256GB (Black)-15
Apple iPhone SE 2020 256GB (Black)-15
4.7-inch (diagonal) widescreen LCD Retina HD display 1334-by-750-pixel resolution at 326 ppi Fingerprint-resistant oleophobic coating A13 Bionic chip SIM Card: nano-SIM and eSIM Rated IP67 (maximum depth of 1 meter up to... [Learn more]
Brand: AppleSKU: 145168N/ASee more: Apple, Mobile Phone, MOBILE PHONES, NAKZ, New Arrivals, ProductsFilter by: iPhone, NAKZ
Main 12MP Wide camera ƒ/1.8 aperture
Front 7MP camera ƒ/2.2 aperture
ကြာရှည်ခံတဲ့ ဖန်သားမျက်နှာပြင်နှင့် အလူမီနီယံကိုယ်ထည်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ iPhone SE 2020 ကို ICTမှာ ဝယ်ယူအားပေးလို့ ရပါပြီ။ စမတ်ဖုန်းတွေကို လက်ဖဝါးထဲမှာ ကိုင်ရတာ အဆင်မပြေဖြစ်နေရင်တော့ ဒီ 4.7 လက်မ Retina HD Display ကတော့ အိုကေ စေမှာပါ။ ခန္တာကိုယ်သေးတယ်ဆိုပေမယ့် iPhone 11 Pro မှာ သုံးထားတဲ့ A13 Bionic chip ကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့် performance ပိုင်းကတော့ top notch ပါပဲ။ နောက်ဆုံးပေါ် Game ကစားတာတင်မကပဲ augmented realityနဲ့ အလုပ်လုပ်တာတို့၊ ကစားတို့အတွက်ပါ အသုံးဝင်ပါတယ်။ ကင်မရာပိုင်းမှာလည်း Portrait mode ကို iPhone 11 Proလို selfie ဆွဲရာမှာ သုံးလို့ ရပါပြီ။ ဗီဒီယိုကလည်း 4K ဖြင့် ရိုက်ကူးလို့ ရတဲ့အတွက် Full HD ထက် လေးဆ သာလွန်တဲ့ အသေးစိတ် ပုံရိပ်တွေကို ခံစားလို့ ရမှာပါ။ ဒီလိုအချိန်မှာ iPhone SE ရဲ့ အားသာချက်ကတော့ Touch ID ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Mask တပ်ထားရင်လည်း လက်ဗွေနဲ့ ဖုန်းကို unlock လုပ်လို့ ရတဲ့အတွက် အလွန်အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် water resistant ဖြစ်လို့ ၁ မီတာ အနက် ရေထဲမှာ မိနစ် ၃၀ ကြာခံနိုင်တယ်။ ကော်ဖီ၊ ဆော်ဒါခွက် မှောက်ကျတာလေက်ကတော့ အေဆေးပါပဲ။ ဘတ္တရီပိုင်းမှာတော့ ၁၃ နာရီကြာ ဗီဒီယိုကြည့်လို့ ရတဲ့အပြင် အားကုန်သွားရင်လည်း 18W fast-charge လုပ်မလား? wireless အားသွင်းမလား? အကုန်အဆင်ပြေပါတယ်။ Fast-charge လုပ်ရင် ၅၀% ပြည့်ဖို့ မိနစ် ၃၀ ပဲ စောင့်ဖို့ လိုပါတယ်။ အရောင်အသွေးတွကတော့ အဖြူ၊ အမဲ၊ အနီ ရှိပြီး storage တွေကတော့ 64. 128. 256GB ဖြင့် ထွက်ရှိလာပါတယ်။
The advanced camera system with A13 Bionic brings you Portrait mode, which artfully blurs the background to put the focus on your subject even when you’re taking selfies.